Nagarik Shukrabar - सरोज-आश्मा : ‘गर्लफ्रेन्ड–ब्वाइफ्रेन्डभन्दा पनि रिस उठ्दैन’
शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७८, ०६ : ५४
आइतबार, ०५ फागुन २०७५, ०६ : १८ | अनिल यादव
नेपालमा लोकप्रिय डान्स ग्रुप कार्टुन्ज क्रुका जोडी हुन्, सरोज अधिकारी र आश्मा विश्वकर्मा । धेरैजसो हिट गीतमा नाचिसकेको यो जोडीलाई दर्शकले म्युजिक भिडियोमा खुब रुचाएका छन् । उनीहरु जोडी बनेर नाचेको जुनसुकै सामग्रीले पनि सोसल मिडियामा भव्य भ्यूज पाइरहेको हुन्छ । सोमबार दिउँसो यो जोडीसँग भ्यालेन्टाइन्स विशेष गफ गर्न काठमाडौं, कपुरधारास्थित उनीहरुकै स्टुडियो पुग्दा दुवै खुलेर प्रस्तुत भए । फोटोसुटका क्रममा आश्मा सरोजको खुब ख्याल गर्थिन् । कहिले आफ्नो हातले सरोजको आँखा मिलाइदिन्थिन्, कहिले उनको शरीरमा हिँडिरहेको कीरा पन्छाइदिन्थिन् । दृश्य देख्दा लाग्थ्यो– प्रेम होस् त यस्तो, केयरिङ होस् त यस्तो ! बजारमा सरोज र आश्माको प्रेम सम्बन्धबारे ठूलो चर्चा छ तर दुवैले यसलाई खुलेर स्विकारिसकेका छैनन् । दुवैलाई सँगै राखेर उनीहरुको सम्बन्ध र संघर्षबारे अनिल यादवले गरेको अन्तरंग कुराकानी :
सरोज–आश्मा : अँ, हामी त सन्चै छौँ (एकै स्वरमा) ।
सरोजः उनको फिजिकल एक्सरसाइज धेरै भयो क्या हिजो (हाँस्दै) । सिक्स एप्स निकाल्ने भनेर पूरा फिजिकल गरेको गरैकै छिन् उनले ।
आश्मा : (मुस्कुराउँदै) मलाई त हाँस्दा पनि पेट दुखिरा’छ । एकदमै गाह्रो हुने रैछ ।
यत्रो केटाहरुको हुलमा तपार्इं एक्ली केटी कसरी जोडिनुभयो ?
आश्मा : धेरै लामो कहानी छ । छोटकरीमा भन्दा म ठमेलको नेपाल हिपहप फाउन्डेसन (एनएचएफ) को हलमा एक्लै नै डान्स प्राक्टिस गर्न जान्थेँ । त्यहाँ कार्टुन्ज क्रु पनि आउनुहुन्थ्यो । हाम्रो सिक्ने समय एउटै हुन्थ्यो । त्यसैले चिनजान भयो । घुलमिल हुँदै गइयो । त्यसपछि क्रुबाट ‘आऊ हाम्रो टिममा, मिलेर काम गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव आयो । अनि म जोडिएँ ।
सरोज : बाटोमा नाच्दानाच्दै हामी ठमेलको स्टुडियोसम्म पुगेका थियौँ । त्यहाँ आश्माको पनि आफ्नै केटीहरुको ग्रुप थियो । बिस्तारै हाम्रो क्रु मेम्बर पनि छुटिँदै गए । घरपरिवार धान्न गाह्रो भएपछि कोही विदेश गए, कोही कता । उता आश्माको ग्रुप पनि त्यसरी नै छुट्यो । तर आश्माले भने जति गाह्रो भए पनि छाडेकी थिइनन् । दुवैतिर गाह्रो भइरहेका बेला हामीले आश्मालाई ‘सँगै मिलेर काम किन नगर्ने’ भनेर अप्रोच गरेका थियौँ । आखिर ग्रुपमा एउटा केटी हुँदा छुट्टै चार्म पनि हुने, राम्रो पनि । उनले पनि ‘ओके’ गरिन् । एक हिसाबले भन्नुपर्दा उनी आएपछि ग्रुपमा ‘गुडलक’ पनि भित्रियो । संघर्ष त पहिल्यैदेखि गरिरहेका थियौँ तर नोटिस्ड हुन सकिरहेका थिएनौँ । उनी आएपछि संसारभर नोटिस्ड भयौँ ।
आश्मा : म त खुसी भएकी थिएँ उहाँहरुको ग्रुपमा जान पाउँदा । किनभने मलाई कार्टुन्ज क्रु एकदमै मनपथ्र्यो ।
सरोज : किन नहुनु ? हामी त छक्क परेका थियौँ उनको डान्स हेरेर । हाम्रो भन्दा पनि दामी डान्स । स्टुडियोमा सिक्न जाँदा मिक्की दाइले भन्नुभएको थियो, ‘एउटा केटी छ, तिमीहरुभन्दा बबाल नाच्छिन्, बबाल मिहिनेती छिन् ।’ पछि एउटा सोमा नाचेको देखेपछि विश्वास लाग्यो, ‘हो रैछ ।’
आश्मा : कुन सोमा फेरि (हाँस्दै) ?
सरोज : त्यही दरबारमार्गमा भएको थियो नि ! बबाल नाचेकी थिइन् ।
आश्मा : फ्रयांक्ली भन्दा कार्टुन्ज क्रुका सबैजना एकदम राम्रो, ह्यान्डसम ह्यान्डसम । हामी केटीहरुलाई खुब राम्रो लाग्ने । राम्रोसँग बोल्ने पनि, जिस्किने पनि । (हाँस्दै)
आश्मा : अँ, सुरुमा त उहाँलाई नै भयो । त्यतिबेला ब्याटल अफ नेपाल प्रतियोगिता भएको थियो । त्यसको एमजे (माइकल ज्याक्सन) भने कार्टुन्ज क्रुबाट उहाँले गर्नुभएको थियो । एकदमै राम्रो लागेको थियो । (सरोजतिर हेर्दै) त्यसपछि त मैले तपार्इंलाई एमजे भनेरै बोलाउँथे है ?
सरोज : अँ, हो नि (हाँस्दै) ।
सरोज : ग्रुप बनेको १० वर्ष भयो । उनीसँग चिनजान भएको, सँगै प्राक्टिस गरेको ९ वर्ष भयो । क्रुमा जोइन भएर काम गर्न थालेको चाहिँ ७ वर्ष ।
आश्मा : त्यस्तो खासै त लागेन किनभने बिगर्ल गर्दा नै कोही थिएन प्राक्टिस गर्ने केटीहरु । केटैकेटासँग सिक्ने बानी भइसकेको थियो । पछि आका हुन् केटीहरु । पछि पो मिक्की दाइ (टिचर) ले केटीकेटीको ग्रुप बनाऊ न भनेपछि सुरुमा त म एक्लै भए पनि नाचिरहेकी हुन्थेँ ।
सरोज ः तर, उनी हामीलाई केटीभन्दा पनि केटैजस्तो लाग्थ्यो । (आश्मा जोडले हाँसिन्) डान्स पनि केटैको जस्तो बबाल । व्यवहार त्यस्तै । ड्रेस त्यस्तै हुन्थ्यो । सबैले ‘ए भाइ’ भनेर जिस्काउँथे पनि ।
आश्मा : आश्मालाई वाश्मा बनाएर वाश्मा भाइ भन्थे (हाँस्दै) ।
आश्मा : अँ, फेमिली, सोसाइटी सबैले अर्कै नजरले हेर्थे । केटाकेटाको बीचमा एक्लै नाच्छे भन्दै ममीलाई कुरा लाउनेहरु पनि हुन्थे ।
सरोज : एकपल्ट त उनलाई ममीले स्टुडियोमा नाचिरहेकै बेला आएर पिटेको पनि हो नि !
आश्मा : हो, त्यतिबेला लठ्ठी भाच्नेगरी पिटेर लैजानुभएको थियो । एकहप्ता जति थुनेरै राख्नुभयो । आखिर ममी नै त हो । मन पग्लिहाल्छ नि । माया लागिहाल्छ नि । यसलाई मनैदेखि नाच्न मन लागेको रै’छ भनेर बुझ्नुभयो । ड्याडीले पनि सम्झाउनुभयो । त्यसपछि नाच्न जान दिनुभयो ।
आश्मा : अहिले एकदमै खुसी हुनुहुन्छ ।
सरोज : त्यतिबेला केटाहरुलाई नै नाच्दा औंला उठाउँथे, झन् केटीहरुलाई कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो होला । बरु पैसा कमाउन विदेश जा, यहाँ नाचेर के पाउँछस् भनेर गाली गर्थे । नाच्नु भनेको त प्रोफेसन नै सोच्दैनथे । बरु अहिले डान्समा स्कोप छ ।
आश्मा : हो नि, अहिले त नाच्नेहरुले विश्व खाइसके (हाँस्दै) ।
सरोज : कस्तो खालको सम्बन्ध भन्नु (हाँस्दै) ! साथी पनि हुन् । डान्स पार्टनर पनि हुन् । एकअर्कालाई हेल्प गरिराछौँ, लाइफमा अघि बढ्नलाई । हामीहरु सँगै हुँदा एकदमै खुसी हुन्छौँ । सबैजना सँगै बस्दा परिवारजस्तो लाग्छ ।
आश्मा : हो, हामी एकदमै मिल्ने साथी हौँ । मेरो जे पनि समस्या बुझ्नुहुन्छ उहाँले । मैले मेरो हरेक कुरा सेयर गर्ने नै उहाँसँग हो ।
आश्मा : म पहिलेदेखि तपाइ नै भन्छु उहाँलाई ।
सरोज : अहिलेसम्म तँ र तिमी भनेको त सुनेको छैन (हाँस्दै) । मलाई मात्रै हैन सबैलाई उनले रेस्पेक्ट गरेर नै बोल्छिन् ।
आश्मा : फेरि उहाँ टिमको लिडर पनि त हो । मेरो नजरमा त उहाँ वल्र्डकै बेस्ट लिडर हो । उहाँ जत्तिको लिडर त नेपालमा पनि छैन ।
आश्मा : किनकि आफ्नो टिम मेम्बरको भावनालाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ । कोही त कोही बोस बन्न खोज्छन् नि । तर उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न । त्यही भएर त कार्टुन्ज क्रु आज यहाँसम्म आइपुगेको छ ।
सरोज : हाम्रो सपना थियो, कुनै दिन आफ्नै स्टुडियो खोल्ने । आफ्नै स्टुडियो, आफ्नै अफिस होला अनि त्यही अफिसमा आएर तपार्इंहरुजस्तो पत्रकारले कुनै दिन यसरी इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ होला भन्ने त कल्पनासम्म गरिएको थिएन । बाटोमा नाच्दै हिँड्दा देखेको त्यो सपना आज पूरा हुँदै जाँदा कम खुसी लाग्दैन ।
सरोज : एकदमै खुसी लाग्छ नि ।
सरोज : कोसिस त हामी गरिरहेकै छौँ । पछिसम्मै सँगै काम गरौँ भन्ने सोच छ । हेरुम, अब के हुन्छ !
सरोज : अहिलेसम्म प्लान त गरेको छैन । हेरुम के हुन्छ (हाँस्दै)
आश्मा : दर्शकहरुले हाम्रो जोडी मनपराउँदा खुसी लाग्छ । नेपालमा पनि यस्तो जोडी होस्, जो सधैँ सँगै होस् । त्यो उदाहरण हामी हुन चाहन्छाँै ।
सरोज : यस्तो जोडी त वल्र्डमै पनि कम छ नि त । यत्रो लामो समय भयो अहिलेसम्म हामीले छुटेर एउटा पनि काम गरेका छैनाैं । नेपालमा पनि कति जोडीहरु छन् तर छुटेर पनि खेलिरहेका हुन्छन् । तर हाम्रो त सोच नै सकेसम्म कहिल्यै छुटेर नखेलौँ भन्ने हो ।
आश्मा : झगडा ! (आश्चर्य प्रकट गर्दै) । एकपल्ट ‘यू एन्ड आई’ सिरिजमा म सरोजजीसँग छुट्टिएर सन्नीजीसँग बिहे गर्दाको सिन थियो । त्यही सिनपछि कतिपय न्यूजहरुमा त्यस्तै खालको हेडलाइन्स आएको थियो । सायद त्यही हल्लाको कुरा गर्नुभएको होला । तर, हामीबीच अहिलेसम्म झगडा भएकै छैन । नहोस् पनि ।
सरोज : खोइ, त्यो त हामीलाई नै थाहा छैन (हाँस्दै) । हाम्रो त दिनै यसरी कट्छ । आउँछाैँ, प्राक्टिस गर्छौँ । अहिले हामी दुवै काममा फोकस्ड छौँ ।
सरोज : प्रेम त सबैसँग छ । ग्रुपसँग पनि छ ।
आश्मा : होइन, हामीसँगैको एउटै बोली हो (हाँस्दै) ।
सरोज : जे होस्, हामी सँगै हुँदा एकदमै खुसी हुन्छौँ ।
आश्मा : जिग्री हो उहाँ मेरो (हाँस्दै) ।
सरोज : मान्छेहरुले जसरी सोच्दा पनि खुसी लाग्छ ।
सरोज : किन रिसाउनु ? अब उहाँहरुले हामीलाई गर्लफ्रेन्ड–ब्वाइफ्रेन्ड देख्न चाहनुहुन्छ नै । हामीले होइन पनि भनेका छैनौँ, हो पनि भनेका छैनौँ । हामीलाई पनि खुसी नै लाग्छ । हाम्रो पनि बेस्ट जोडी भएर चिनिने इच्छा छ । हाम्रो जोडीलाई देखेर अरूले पनि केही सिकून् भन्ने लाग्छ ।
आश्मा : त्यो त थाहा छैन । समयले बताउला । तर चाहना त मेरो मात्रै हो र, सबै केटीको छ नि ।
सरोज : (हल्का लजाउँदै) त्यस्तो त होइन हौँ !
आश्मा : हो नि, धेरै केटी तपाईंको फ्यान छ । जे होस्, जो उहाँको वाइफ हुन्छ त्यो एकदमै लक्की हुन्छ ।
आश्मा पनि त्यस्तै हो तपार्इंका लागि ?
सरोजः आश्मा त मेरा लागि धेरै ठूलो हो । म त सधैँ भन्ने गर्छु, तिमी त लक्की चार्म हौ । ग्रुप माथि पुग्नमा उनको ठूलो हात छ ।
सरोज : लाइफ हो, केही कुरा भन्न सकिन्न । कतिखेर के हुन्छ, कसलाई थाहा ? मेरो सपना भनेको सुरुमा मेरा अरु साथीहरु सबै लाइफ बनोस् भन्ने छ । अहिले यस्तो गर्ने भनौँला, पछि भएन भने के गर्ने ? फेरि मलाई प्रेमी–प्रेमिका भनेर अघि बढ्नुभन्दा एउटा राम्रो साथी भनेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । बरु पछि जे हुन्छ, हुन्छ ।
सरोज–आश्मा : (मुन्टो हल्लाउँदै दुवै मुस्कुराए मात्र)
सरोज : के मनपर्छ तिम्लाई (हाँस्दै) ?
आश्मा : (मुस्कुराउँदै) एकदमै मोटिभेसनल हुनुहुन्छ । मोटिभेट गरिरहनुहुन्छ । आफ्नो करिअरप्रति एकदमै फोकस्ड हुनुहुन्छ । मिहिनेत गर्नुहुन्छ । केटीहरुलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ । धेरै छ राम्रो बानी त जुन मलाई मनपर्छ ।
सरोज : उनी एकदम सोझो र मिहिनेती छन् । जे होस्, कहिल्यै पनि नाई भन्दिनन् । यति हिट भइसकेको छ, तैपनि कहिल्यै भाउ खोज्दिनन् । उनले हाम्रो ग्रुपका लागि धेरै प्रोजेक्टहरु छाडेकी छिन्, धेरै फिल्महरु छाडेकी छिन् । जुन पछि एकदमै हिट पनि भएका छन् ।
आश्मा : त्यो त तपाईंले पनि छोड्नभाको छ नि !
सरोज : उनलाई सोलो अफर एकदमै धेरै आउँछ । बाहिरतिरको प्रोग्राममा पनि एकदमै धेरै बोलाउँछन् । तर, उनले ग्रुपका लागि कम्प्रोमाइज्ड गरेरै कहीँकतै जाँदिनन् । यति त कोही पनि मान्छेले कसैका लागि गर्न सक्छ भन्ने नै लाग्दैन । अलिकति फाइदा पायो भने ग्रुप छोडेर गइदिनेहरु पनि धेरै देखेको छु मैले । तर, उनी ठूल्ठूलो अफर ग्रुपकै कारण गर्दिनन् । म त फिल्म खेल भनिरहेको हुन्छु । मलाई पनि मन छ, उनलाई हिरोइन भएको हेर्ने । तर मान्दै मान्दिनन् ।
आश्मा : ग्रुपसँग छुट्टिएर काम गर्नै मन लाग्दैन ।
आश्मा : अँ, खेल्छु । हाम्लाई आको पनि हो तर स्क्रिप्ट चित्त नबुझेर खेलेनौँ ।
सरोज : त्यो पनि हो । फेरि फिल्ममा टाइम दिँदा ग्रुप टुक्रिएला भन्ने डर लाग्छ । त्यसैले ग्रुपलाई नै अगाडि बढाउनेतिर लागेका छौँ । आज हामी दुईजना जुन स्थानमा छौँ, त्यो त टिमले गरेर हो । त्यसैले त्यो टिमलाई आज बिर्सनु त भएन नि । त्यसैले हामी जुन कुराले टिमलाई फाइदा पुग्छ, त्यो मात्रै गर्छाँै ।
सरोज : खोइ मुभी हेर्न जान्छौँ होला कि !
आश्मा : हामी त जे मनाउँदा पनि ग्रुपमै हो । भ्यालेन्टाइन्स पनि, क्रिसमस पनि, सबै ।
सरोज : उनी त घुम्न जाउँ भनिरहन्छिन् तर भ्याइँदैभ्याइँदैन ।
सरोज : मुख्य त एकअर्कालाई बुझ्नुप¥यो । कसरी खुसी हुन्छ, थाहा हुनुपर्यो ।
आश्मा : लभ त भइहाल्छ । सँगसँगै विश्वास र समझदारी पनि हुनुपर्छ ।
सरोज : प्रेम भएरै त अहिलेसम्म सँगै छौँ । हाम्रो त सपना भनेकै विश्वकै बेस्ट कपल बन्ने हो । ड्याडीममीहरुले पनि हामीलाई संसारकै सबैभन्दा राम्रो जोडी भन्नुहुन्छ ।
आश्मा : अँ, काम पनि सधैँ सँगै गर, छुट्टिएर नगर भन्नुहुन्छ ।
सरोज : बिहेको त कुरा कहिल्यै निस्किँदैन । पहिला लाइफ बनाउने कुरा नै आउँछ ।
आश्मा : ज्वाइँ बनाउने कुरा त हुँदैन तर तिमीहरुको जोडी खुब मनपर्छ भनेर भन्ने भने गर्नुहुन्छ । हाम्रो जोडीलाई लिएर आएका कमेन्ट पढ्नुहुन्छ । मलाई पनि हाम्रो कपल वल्र्डकै बेस्ट कपल होस् भन्ने लाग्छ ।
आश्मा : प्रेम भनेको एकअर्कालाई बुझ्नु हो, उसको चाहनालाई बुझ्नु हो, एकअर्कालाई सम्मान गर्नु हो, विश्वास गर्नु हो ।
सरोज : प्रेममा एकअर्कालाई खुसी राख्नु सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । कहिल्यै एकअर्कालाई सँगै हुँदा बोर हुनुभएन ।
सरोज : खुसी लाग्छ । त्यति बेला दुःख गरियो र त, आज यहाँसम्म आइपुगियो । मसँगै दुःख गरेका सबै साथीहरु छुट्टिएर जाँदा पनि मैले हरेस खाइनँ । अरु ग्रुपका साथीहरु मिलाएर भए पनि कार्टुन्ज क्रु लाई जोगाएँ । पहिले छोडेका साथीहरु अहिले विदेशबाट फर्केर आएको बेला ‘तैंले चाँही गरेर देखाइस्’ भन्दाजस्तो खुसी त कहिल्यै लाग्दैन । नेपालमै बसेर पनि परिवार पाल्न सकिरहेको छु, यो भन्दा ठूलो कुरा के हुन सक्छ र !
आश्मा : धेरै खुसी लाग्छ । धेरै नराम्रा दिनहरु पनि थिए । ती भोगाइहरुबाट धेरै सिकियो पनि । जे होस्, परिस्थितिलाई सामना गर्दा जे पनि सम्भव रहेछ भन्ने लाग्छ ।
सरोज : फिल्मजस्तै हुँदोरहेछ क्या लाइफ । एकचोटी सम्झियो भने त्यस्तै लाग्दोरहेछ । सँगै बसेर पनि हामी रोएका छौँ । दुःखको समय थियो । ग्रुपबाट एकजना साथीले छोड्दा पनि आँखाबाट तपक्क आँसु आउँथ्यो । त्यतिबेला सोच्दाखेरी, फिल्ममा पनि यस्तै हुन्थ्यो है भन्ने लाग्थ्यो ।
सरोज : हो, हामी धेरै दुःखको टाइममा पनि सँगै थियो, अहिले अलिअलि सुःख मिल्दा पनि सँगै छौँ । पछि पनि सँगै होस्, त्यही चाहन्छाैं हामी ।
सरोज : पहिला मेरा साथीहरु सबैको लाइफ सेटल गराउने, अनि मात्रै हामी गर्ने हो । किनभने मैले मेरा साथीहरु सबै अभिभावकलाई प्रमिस गरेको छु, नाचेरै भविष्य बन्छ भनेर । त्यसैले पहिला अरुको लाइफ बनाएर मात्र हामी हाम्रो लाइफबारे सोच्छौँ ।
आश्मा : हो (मुन्टो हल्लाउँदै) ।